UkuNgenelela kweNtlalo: Kutheni, Nini & Njani
Iphehlelelwe okokuqala yi-Ariadne Labs nge-13 kaMatshi ngo-2020 phantsi kwesihloko esithi "UkuHanjiswa kweNtlalontle: Olu ayisiyo imini yekhephu" | Ihlaziywe ngoMatshi 14, 2020
Eli nqaku labhalwa ngumntu wase-US kwaye, njalo, linolwazi kunye nezalathiso kwi-US Kodwa uninzi lomxholo wayo luya kulunga naliphi na ilizwe kunye nenkcubeko yehlabathi
Ndiyazi ukuba kukho isiphithiphithi malunga nento emasiyenze emva kweli xesha lingazange libekho bhubhane, ukuvalwa kwezikolo, nokuphazamiseka esidlangalaleni. Njengogqirha wokhathalelo olusisiseko kunye nenkokeli yezempilo yoluntu, ndibuzwe ngabantu abaninzi ukuba ndibeke uluvo lwam, kwaye ndiza kuyinika apha ngezantsi ngokusekwe kolona lwazi lufumanekayo kum namhlanje. Ezi ziimbono zam zobuqu, kwaye ukuthatha kwam amanyathelo afanelekileyo ngaphambili.
Endinokukucacisa ngokucacileyo ukuba into esiyenzayo, okanye esingayenziyo, kwiveki ezayo iya kuba nefuthe elikhulu kwindalo yengingqi kunye mhlawumbi yesizwe. Simalunga neentsuku ezili-11 kuphela emva kwe-Italiyane ( idatha yase-US ) kwaye ngokusemgceni ukuphindisela into eyenzeka ngelishwa naphaya kulo lonke ixesha laseYurophu kungekudala.
Okwangoku, isiqulatho ngokujonga umkhondo wonxibelelwano kunye novavanyo olwandisiweyo yinxalenye yesicwangciso sobuchule. Kufuneka sihambele ekunciphiseni ubhubhane ngokuchithakala, ukungakhululeki, kunye nokungena okugqibeleleyo kuluntu . Oko kuthetha ukuba kungekuphela nje ukuvala izikolo, ukusebenza (ngokusemandleni), ukuhlangana kwamaqela, kunye nemisitho yoluntu, kodwa nokwenza izigqibo zemihla ngemihla zokuhlala kude nomnye nomnye kangangoko kunokwenzeka kwiFlatten the Curve engezantsi.
Inkqubo yethu yezempilo ayizukukwazi ukujongana nenani eliqikelelweyo labantu abazakufuna ukhathalelo olugqithisileyo ukuba ngaba asinakukwenza konke oko kunye nokuzinza ngokwasentlalweni. Ngosuku oluqhelekileyo, sinabasebenzi abangama-45,000 kwiibhedi ze-ICU kuzwelonke, ezinokuthi zixhonywe kwintlekele ukuya malunga ne-95,000 ( idatha yase-US ). Iingqikelelo ezilinganiselweyo zibonisa ukuba, ukuba imeko yangoku yosulelayo ibambe, umthamo wethu (ekuhlaleni nakazwelonke) unokufumana ubunzima bade babe phakathi ku-Epreli. Ke ngoko, ezona zicwangciso zinokusenza simke kule meko ngokunxibelelene nezo zinokusenza ukuba sisebenzisane njengabantu ukugcina impilo yoluntu ngokuhlala bodwa.
Ubulumko, kunye nemfuneko, yoluhlobo olunoburhalarhume ngakumbi, kwangoko, kwaye luhlobo olugqithisileyo lokuncitshiswa kwentlalo lunokufumaneka apha . Ndiyakucela ukuba uthathe umzuzu ukuhamba kwiigrafu ezisebenzayo-ziya kuqhuba ekhaya inqaku malunga nento ekufuneka siyenzile ngoku ukunqanda ingxaki embi kamva. Izifundo zembali kunye namava amazwe kwilizwe lonke asibonisile ukuba ukuthatha ezi zenzo kwangoko kunokuba nefuthe elibi kubungakanani besaqa. Ke le nto iphuculweyo yokuncitshiswa kwezoluntu ithini yonke imihla, xa zitshitshisiwe izikolo?
Nanga amanyathelo anokuqala ukuwathabatha ngoku ukugcina usapho lwakho lukhuselekile kwaye uthathe inxaxheba yakho ukunqanda ingxaki eyonyukayo:
1. Kufuneka sinyanzele iinkokheli zethu zasekhaya, ezelizwe, kunye nezelizwe ukuba zivale ZONKE izikolo nezithuba zikawonkewonke kwaye ziyarhoxisa yonke iminyhadala kunye neendibano zoluntu ngoku .
Indawo yase dolophu, idolophu nge dolophu ayiyi kuba nasiphumo saneleyo. Sifuna indlela kwilizwe lonke, kweli lizwe kula maxesha okuzama. Nxibelelana nommeli wakho kunye neRhuluneli yakho ubabongoze ukuba benze umthetho wokuvalwa konyaka. Njengangoku, amazwe amathandathu sele ekwenzile oko. Isimo sakho kufuneka sibe ngomnye wabo. Ndikhuthaze iinkokheli ukuba zonyuse imali yokulungiselela imeko kaxakeka kwaye zenze ukuba uvavanyo lwe-coronavirus olwandisiweyo lube yinto ephambili neliphezulu. Sikwafuna ukuba abezomthetho benze umthetho wokonyusa ikhefu lokugula elihlawulelwayo kunye nezibonelelo zokungaphangeli ukuze uncede abantu benze umnxeba ofanelekileyo ukuba bahlale ekhaya ngoku.
2. Akukho mntwana udlalwayo, amaqela, abantu bokulala, okanye iintsapho / izihlobo ezandwendwela amakhaya kunye namagumbi.
Oku kuvakala kakhulu kuba kunjalo. Sizama ukwenza umgama phakathi kweeyunithi zosapho naphakathi kwabantu. Kungangonwabisi ngokukodwa kwiintsapho ezinabantwana abancinci, abantwana abanezakhono okanye imiceli mngeni, kunye nakubantwana abathanda nje ukudlala nabahlobo babo. Kodwa nokuba ukhetha umhlobo omnye kuphela ukuba abe ngaphezulu, wenza amakhonkco amatsha kunye namathuba ohlobo lokuhanjiswa abathi sonke isikolo sethu / umsebenzi / ukuvalwa komnyhadala woluntu bazame ukukuthintela. Iimpawu ze-coronavirus zithatha iintsuku ezine ukuya kwezihlanu ukuba zibonakalise. Umntu oza apha ekhangeleka kakuhle unokudlulisela intsholongwane. Ukwabelana ngokutya kusengozini- ngokuqinisekileyo andikhuthazi ukuba abantu bakwenze oko ngaphandle kosapho lwabo.
Sele sithathe amanyathelo aqatha entlalontle ukusombulula esi sifo sibi kakhulu-masingayisebenzisi ngenkuthalo imizamo yethu yokuba nenqanaba eliphezulu lokunxibelelana ezindlini zabantu endaweni yezikolo okanye kwiindawo zomsebenzi. Kwakhona -ubulumko bokuhamba bunkenenkene kwintlalontle kukuba inokuwugubungela umda ngaphezulu, inike inkqubo yethu yezempilo ithuba lokungakhathalelwa, kwaye ekugqibeleni inokunciphisa ubude kunye nemfuno yexesha elide lokuncipha koluntu okugqithisileyo kamva (bona into enayo yahanjiswa e-Itali nase Wuhan). Sonke kufuneka senze eyethu indima ngala maxesha, nokuba oko kuthetha ukungonwabi okwethutyana.
3. Zikhathalele wena nosapho lwakho, kodwa gcina umgama ekuhlaleni.
Ukuzivocavoca, thatha uhambo / ubaleka ngaphandle, kwaye uhlale unxibelelwano ngefowuni, ividiyo, kunye nezinye izixhobo zentlalo. Kodwa xa uphuma phandle, yenza konke okusemandleni akho ukugcina ubuncinci beenyawo ezintandathu phakathi kwakho kunye nabangengomalungu osapho. Ukuba unabo abantwana, zama ukungasebenzisi izixhobo zikawonke-wonke njengezakhiwo zendawo yokudlala, njengoko i-coronavirus inokuhlala ngeplastiki kunye nesinyithi kangangeentsuku ezisithoba, kwaye ezi zinto azicocwa rhoqo.
Ukuya phandle kuya kubaluleka ngala maxesha angaqhelekanga, kwaye imeko yezulu iyaphucuka. Phuma phandle yonke imihla ukuba uyakwazi, kodwa hlala ngokwasemzimbeni kude nabantu abangaphandle kosapho lwakho okanye abantu ohlala nabo. Ukuba unabo abantwana, zama ukudlala umdlalo webhola wosapho endaweni yokuba abantwana bakho badlale nabanye abantwana, kuba imidlalo idla ngokuthetha ukunxibelelana ngokwasemzimbeni nabanye. Kwaye nangona sinqwenela ukutyelela abadala kwindawo esihlala kuyo ngokobuqu, andizukundwendwela amakhaya abantu abalupheleyo okanye ezinye iindawo apho kuhlala khona uninzi lwabantu abadala, njengoko basemngciphekweni omkhulu wokufumana iingxaki nokufa kwabantu abasuka kwi-coronavirus.
Ukusasazeka kuluntu kungathabatha ixesha (emva kwayo, uninzi lwethu zizidalwa zentlalo). I- CDC ibonelela ngeengcebiso kunye nezixhobo zokunciphisa lo mthwalo, kwaye ezinye izibonelelo zibonelela ngeendlela zokuhlangabezana noxinzelelo olongeziweyo ngeli xesha.
Kufuneka sifumane ezinye iindlela zokunciphisa ukubekwa bodwa eluntwini phakathi kweendawo zethu ngeendlela ezizizo endaweni yokutyelelwa ngabantu.
4. Ukucuthwa kwamaxesha okuya ezivenkileni, kwiivenkile zokutyela nakwiivenkile zekofu okwangoku.
Ewe, ukuya kwiivenkile zokuthenga kuya kunyanzeleka, kodwa zama ukubanciphisa kwaye uhambe ngamanye amaxesha xa bengathathi ntweni. Cinga ngokubuza iivenkile ezithengisa ukutya ukuba zitsale abantu emnyango ukuze banciphise inani labantu ngaphakathi kwivenkile nangaliphi na ixesha. Khumbula ukuhlamba izandla zakho ngaphambi nasemva kohambo lwakho. Kwaye shiya iimaski zonyango kunye neigloves kubagqirha-sifuna ukuba babanyamekele abagulayo. Gcina indawo kude nabanye ngelixa uyokuthenga-kwaye ukhumbule ukuba ukubonelela ngokubonelela ngeempembelelo ezimbi kubanye abantu, thenga oko ukufunayo kwaye ushiye wonke umntu. Thatha-ukutya kunye nokutya yi riskier kunokwenza ukutya ekhaya unikezwe amakhonkco phakathi kwabantu abalungiselela ukutya, ukuthutha ukutya kunye nawe. Kunzima ukwazi ukuba ungakanani umngcipheko, kodwa ngokuqinisekileyo uphezulu kunokwenza ukuba ube sekhaya. Kodwa unganakho kwaye kufuneka uqhubeke nokuxhasa amashishini akho amancinci asekhaya (ngakumbi iivenkile zokutyela kunye nabanye abathengisi) ngeli xesha linzima ngokuthenga izatifikethi zezipho kwi-Intanethi onokuzisebenzisa kamva.
5. Ukuba uyagula, hlala wedwa, hlala ekhaya, kwaye unxibelelane nengcali yezonyango.
Ukuba uyagula, kuya kufuneka uzame ukwahlukana nosapho lonke kwindawo ohlala kuyo njengoko unakho. Ukuba unemibuzo malunga nokuba uyafanele na okanye ufumana uvavanyo lwe-coronavirus, ungatsalela umnxeba iqela lakho lokhathalelo olusisiseko kunye / okanye uqwalasele ukubiza iSebe laseMassachusetts iSebe lezeMpilo ku-617.983.6800 (okanye isebe lezempilo lephondo lakho ukuba ungaphandle kweMassachusetts ). Sukuhamba nje uye kwikliniki ye-ambulensi - tsalela umnxeba kuqala ukuze bakunike elona cebiso lililo- elinokubakho ukuya kwiziko lokuvavanya okanye utyelelo olubonakalayo kwividiyo okanye kwifowuni. Ewe kunjalo, ukuba ingxamisekileyo umnxeba u-911.
Ndiyaqonda ukuba kuninzi okwakhelwe kwezi ziphakamiso, kwaye ukuba zibonisa umthwalo wenene kubantu abaninzi, kwiintsapho, kumashishini nakuluntu. Ukuhamba kude ekuhlaleni kunzima kwaye kunokuba nefuthe elibi ebantwini abaninzi, ngakumbi abo bahlangabezana nobuthathaka kuluntu lwethu. Ndiyamkela into yokuba kukho ukungalingani kulwakhiwo kunye nentlalontle eyakhelwe ngaphakathi kunye nokujikeleza kwezincomo zokuncitshiswa kwentlalo. Sinakho kwaye kufuneka sithathe amanyathelo okomeleza impendulo yethu ekuhlaleni kubantu abajamelana nokungakhuseleki kokutya, ubundlobongela basekhaya, nemiceli mngeni yezindlu, kunye nezinye iingxaki ezininzi zokuhlala.
Ndiyaqonda ukuba ayinguye wonke umntu onokwenza yonke into. Kodwa kuya kufuneka sizame ngokupheleleyo njengabahlali, ukuqala namhlanje. Ukuphucula ukusasazeka ekuhlaleni, nokuba kusemini, kunokwenza umahluko omkhulu .
Sinethuba lokukhetha ukusindisa ubomi ngezenzo esizenzayo ngoku esingazukufumana kwiiveki ezimbalwa. Kuyimfuneko kwezempilo yoluntu. Luxanduva lwethu njengabahlali ukwenza izinto ngelixa sisenokhetho kwaye ngelixa izinto zethu zinokuba nefuthe elikhulu kakhulu.
UAsaf Bitton, MD, MPH, ngumlawuli omkhulu weAriadne Labs eBoston, MA.
Khuphela iprinta yeli phepha eprintiweyo
Ufuna ukuhlaziya inguqulelo? Funda kwaye wenze igalelo kwikhowudi yomthombo . Umzekeliso ovela kwiopendoodles
Kutheni lewebhusayithi? Ekuqaleni bendifuna ukwabelana nabamelwane bam eFrance ngenqaku lokuqala. Kodwa ukwazi ukuba abafundanga isiNgesi, kwaye ndifuna ukufaka isandla kumzamo wokusasazeka entlalweni, ndenza le webhusayithi.
Le webhusayithi isebenzisa uGuqulelo lweGoogle ukwenza ukuba umxholo ufumaneke ngeilwimi eziyi-109+.